I-Euroatlas: iimephu ezindala kwifomathi ye-shp-iGeofumadas
NgoJanuwari, 2010 Iiphotography, ezintsha
Kwenzeka kuthi kuthi balandeli bemephu, abathenga kwivenkile enkulu ukuze bazise imephu enkulu esongiweyo okanye i-atlasi eyongeza kwingqokelela yezinto esele sinazo. Ii-encyclopedia zenze konke okusemandleni ukubonisa imephu ezisebenzisanayo kwiFlash okanye kuphuhliso olulinganisa ukusebenza kwenkqubo yolwazi lwejografi, kodwa kwifomathi yevector sabona kuphela iinkqubo zoyilo.
Into eyenziwe yi-Euroatlas ikumgca wokukhetha. Kude kube lixesha elidlulileyo belinikezelwe kupapasho lweeatlasi eziprintiweyo, ngoku bakhuthaza iimephu ezixhaswayo kwifomathi yevektha ngephulo elinomdla:
"yenza i-atlas yakho yembali kunye neemephu zeGIS zembali"
Masibone oko sikushiye ngaphambi kokulala:
Iimephu zeGIS. Ukuba kunjalo iiplastiki zembali, mandulo kunye niselo Kubakhenkethi, i-Euroatlas yanele, kodwa into endibethayo kukuba umaleko we vector unokufumaneka kwiifayile zobume bokusetyenziswa kweenkqubo zeGIS. Bona, ekubeni ingezizo itshokhwe, khankanya kuphela iArcGIS, iJump evulekileyo kunye neMephu yeWindows, kodwa ngokucacileyo le fomathi yakudala ngoku yamkelwe phantse kuyo nayiphi na inkqubo ye-CAD kunye ne-GIS. Beza:
i-pdf kunye nenkcazo yamacandelo
i-prj equka iindawo kunye nokucacisa
kunye nemveli shp, dbf kunye ne-shx.
Phakathi kweemephu kwimeko ye-GIS kukho (okwangoku) iimephu zembali ze nganye yeenkulungwane ze20 ezandulelayo ngamaxabiso ukusuka kwi-30 Euro Ewe kunjalo, kuya kufuneka uphonononge ngononophelo ilayisensi yokusetyenziswa ngeenjongo zokushicilela kwimeko apho ufuna ukupapasha umxholo omtsha.
Kwimeko yeefomathi zeCorel (cdr) okanye ze-Illustrator (ai), sele bezile ngeendlela ezenziwe. Nantsi epheleleyo Imephu yeYurophu 2009 kunye IRoma ya mandulo
Ukuthunyelwa kwewebhu Enye yezinto ezinomdla kukuba iimephu ezininzi zinokujongwa kwi-Intanethi, ukukhuthaza ukuthengwa. Jonga imeko ye IRoma ya mandulo, iintaba ezisixhenxe zokuqala (i-Septimontium), iRoma yekhulu lokuqala kunye ne-mosaic eyenza kube lula ukubona iinkcukacha ... zihamba kakuhle! naseCorel Dweba.
Inomdla kakhulu, ukulungiselela iinjongo zemfundo kunye nezokuhamba ikhangeleka iluncedo kakhulu. Ndiyincoma.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-CAD, i-GIS, okanye zombini?
Post Next Okulungileyo, okubi nokubi kwisithuba esingaphantsi kosukuOkulandelayo »